Ukubheka Emuva Ekuthengweni Kweholide ngo-2013, nokuthi Yini Okufanele Uyikhumbule ngo-2014 | Martech Zone
Ukubheka Emuva Ekuthengweni Kweholide ngo-2013, nokuthi Yini Okufanele Uyikhumbule ngo-2014
NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 UKelsey Cox
Ngaphambi kokuthi usethe isabelomali sakho sokukhangisa ngamatshe kulo nyaka, qiniseka ukuthi ubheka emuva kulokho esikwazile ukukufunda kulo nyaka odlule. Ukuqonda imininingwane ethile elula evela ngenkathi yokuthenga ka-2013 kungasiza ekwaziseni indlela osebenzisana ngayo nabathengi. Ukuthola okusizile nokulimaze abathengi 'ukuthenga ngesikhathi samaholide sika-2013, I-Baynot kuhlolwe abathengi abangu-1,000 XNUMX futhi bahlanganisa imininingwane ku-infographic engezansi.
Uma kukhulunywa ngokuthonya abathengi, ama-48% amakhasimende athi izilinganiso nokubuyekezwa yikho okubenze bavakashela isitolo esiku-inthanethi, kwalandelwa ukukhushulwa nge-imeyili ngama-35% nemiphumela yosesho lwe-google ebandakanya izithombe zomkhiqizo ku-31%. Amaphesenti angamashumi ayisikhombisa nanhlanu alabo abacwaningiwe bacwaninga izilinganiso futhi babuyekeza izikhathi ezimbili noma ngaphezulu ngaphambi kokuvakashela izitolo. Ngenkathi abesifazane benamathuba angu-145% okuletha ukukhushulwa kwe-imeyili kuma-Smartphones abo okuthenga ezitolo, abesilisa banamathuba angama-20% okusesha amanani angcono kwenye indawo ngaphambi kokuthenga kwabo ezitolo. Ngo-2013, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza zesitolo kukhule ngo-48%, kanti izitolo eziletha ulwazi lwamakhasimende lwedijithali olungaguquguquki nolusebenza kahle zivame ukuthola ukuthengiswa kakhulu.
Ukuziphatha kwendaba? Lapho ukumaketha imikhiqizo kubathengi, kubalulekile ukuthi ugcine idijithali engqondweni, ikakhulukazi iselula. Abathengi abaningi ngokwengeziwe benza ucwaningo lwabo futhi bafuna izindlela zokuthola amadili (ukusikisela: imeyili marketing), futhi lo mkhuba uzoqhubeka nokukhula kuphela lapho kungeneka khona amadivayisi eselula akwazi ukunikela ngawo. Ngakho-ke, qapha futhi wenze ngcono ukubuyekeza kwakho, kufaka phakathi okubonwayo, sebenzisa i-imeyili futhi uthuthukise lolo hlelo lokusebenza ukuze uqiniseke ukuthi ulungiselele unyaka we-2014 ophumelelayo.
Tags: umthengiIdathaezokuhweba ngekhompyuthaimeyili MarketinginfographicmarketingUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethitekutsengisa
I-Jiwire: Ukukhangisa Kwamaselula Okunikwe Amandla